San Miguel de Escalada, လီယွန်ရှိ Romanesque မတိုင်မီကရတနာ ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | ယဉျကြေးမှု, လမ်းပြ
San Miguel de Escalada သည်အဓိကတစ်ခုဖြစ်သည် Pre-romanesque အထိမ်းအမှတ ၏ပြည်နယ်ကနေ Leon။ ၉၁၃ ခုနှစ်တွင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည်ဘုန်းတော်ကြီးများနေထိုင်ရန်ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်ခဲ့သည် Cordoba, ဒါပေမယ့်လက်ရှိသာ ဘုရားကျောင်းနှင့်အခြားမှီခို.
၎င်းသည်မြူနီစီပယ်တွင်တည်ရှိသည် ကျောက်တံတားလီယွန်မြို့တော်နှင့်ကီလိုမီတာ ၂၇ ခုအကွာတွင်တည်ရှိသည် စန်တီယာဂိုလမ်း။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို San Miguel သို့ပေးအပ်ထားသည့် Visigoth ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဟောင်းတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သင် Pre-Romanesque ၏ရတနာအကြောင်းပိုမိုသိလိုပါကဆက်လက်ဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1 San Miguel က de Escalada ၏သမိုင်း
2 San Miguel က de Escalada ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
3 San Miguel က de Escalada ၏ codex
4 San Miguel de Escalada ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
San Miguel က de Escalada ၏သမိုင်း
၉၁၂ ခုနှစ်တွင် Abbot Alfonso ဦး ဆောင်သောသံmonာတော်များသည်ဤLeónဒေသသို့ရောက်ရှိလာသည်။ ထိုတွင်နေထိုင်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြပြီး၊ ၉၁၃ ခုနှစ်၌ဘိရှော့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအဖြစ်တစ်နှစ်သာဆောက်ရန်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Astorga ၏စိန့် Genadius.
ယင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သူတို့သည်ငါတို့ပြောခဲ့သည့်ရှေးခေတ် Visigothic ဆောက်လုပ်ရေးမှပစ္စည်းများ၏အားသာချက်ကိုယူခဲ့သည်။ ၎င်းကိုယင်း၏နံရံတစ်ခုတွင်မြင်တွေ့ရဆဲဖြစ်ပြီးမူရင်းဝတ်ပြုရာအိမ်တော်မှကမ္ပည်းစာကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည် ၁၁ ရာစုတွင်ထူးခြားကောင်းမွန်သောကာလတွင်နေထိုင်ခဲ့ရာထိုအချိန်တွင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအသစ်များထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။
XIX တွင်ရှိပြီးဖြစ်သောသိမ်းဆည်းမှုများကြောင့် Mendizábal ဘာသာရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သော San Miguel de la Escalada ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၈၈၆ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် အမျိုးသားမော်ကွန်းတိုင်.
San Miguel က de Escalada ၏ Portico
San Miguel က de Escalada ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီဆောက်လုပ်ရေးကဝိသေသလက္ခဏာများကိုတုံ့ပြန်သည် Pre-romanesque အနုပညာ။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့တင်ပြသောအတူတူပင်ဖြစ်သည် Santa Maria del Naranco o San Miguel က de Lillo Oviedo ၌တည်၏။ ကျယ်ပြန့်စွာပြောရမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည် Visigothic ဒြပ်စင်များကိုအခြား Mozarabic ဒြပ်စင်များနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။
သို့သော်လက်ရှိကျွမ်းကျင်သူများက၎င်းကိုခေါ်ဆိုရန်ပိုနှစ်သက်သည် အနုပညာ restocking။ သင်မှန်းဆခဲ့သည့်အတိုင်းအကြောင်းပြချက်မှာမူဆလင်များစွန့်ခွာခဲ့သည့်ကက်စ်တီလီယံဒေသများတွင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသောခရစ်ယာန်များက၎င်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီနယ်စပ်ဒေသတွေကအဆက်အသွယ်တွေကိုအမြဲတမ်းမောင်းနှင်တဲ့အတွက်ဒီစတိုင်မှာအားကောင်းတယ် mozarabic ဒြပ်စင်ဆိုလိုသည်မှာခရစ်ယာန်များကြောင့်တူညီသောကြောင့်ဖြစ်သော်လည်း Al-Aldalus ပိုင်နယ်မြေမှဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ San Miguel အဆောက်အအုံသည်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတွင်တိုးချဲ့မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ ထိန်းသိမ်းထားသောသူတို့အထဲတွင် ကြီးစွာသော Romanesque မျှော်စင် ရှုပ်ထွေးသောတောင်ပိုင်းကိုလွှမ်းမိုးသော ၁၁ ရာစုမှဖြစ်သည်။
သို့သော်ယနေ့ခေတ်ထိန်းသိမ်းထားသောဆောက်လုပ်ရေးအစိတ်အပိုင်းများအနက်ဘုရားကျောင်းသည်အရေးအကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ ရှိသည် အခြေခံစက်ရုံ နှင့်အလှည့်အတွက်အစဉ်အလာ၏မုတ်ဖြင့်ကွဲကွာနေသော naves သုံးခုသို့ခွဲခြားထားတယ် မြင်းခွာမုတ် မွတ်စ်လင်မ်။ အလားတူပင် naves နှင့်ဗိမာနျတျော၏ ဦး ခေါင်းအကြားအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ perpendicular အာကာသရှိပါတယ် ကွမ်းခြံကုန်း နှင့်အခမ်းအနားများအတွက်ဓမ္မဆရာများအတွက်လတ်လိမ့်မယ်လို့။
ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်, header ကိုရှိပါတယ် apses သုံးခု အတွင်းပိုင်းအပေါ်တစ်ဝက်အဝိုင်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အပြင်ဘက်အပေါ်စတုဂံ။ ထို့အပြင်ဤအားဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည် ဂါလံ Vault အာရပ်ဗလီအများအပြားတွင်တွေ့ရသောသူများနှင့်ဆင်တူသည်။
transept နှင့် ဦး ခေါင်းအကြားတစ် ဦး ရှိပါတယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဟစ်စပန်းနစ်ဝတ်ပြုမှုတွင်ဘုန်းတော်ကြီးသည်သန့်ရှင်းရာဌာနအတွင်း၌ပုန်းအောင်းနေသောလက်ဝါးကပ်တိုင်၏ပုံသဏ္pillာန်အားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည်ထုံးတမ်းစဉ်လာစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၁ ရာစုတွင်ရောမဥပဒေမပြဌာန်းမီအထိကျွန်းဆွယ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုတွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ Iconostasis သည်ထိုသီးသန့်တည်ရှိမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသောဗိသုကာဆိုင်ရာအရာဖြစ်သည်။ သာမာန်အားဖြင့်၎င်းကိုယဇ်ပလ္လင်ရှေ့၌ထားရှိသောဘာသာရေးဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်အလှဆင်ထားသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအနောက်နိုင်ငံများသို့ရောက်သောဘိုင်ဇင်တိုင်းဘုရားကျောင်းများတွင်စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
San Miguel de Escalada ၏မြင်းခွာမုတ်များအသေးစိတ်
အပြင်ပိုင်းတွင်မူဗိမ္မာန်တော်သည်အဆင့်မြင့်တင်ထားသောဆိပ်ကမ်းမရှိခြင်း၊ Asturian Asturian-Romanesque တွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ဝင်ပေါက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်နှင့်၎င်း၏အနောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြစ်ကြသည်။ အတိအကျဆိုရလျှင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်၊ မြင်းခွာမုတ်နှင့်အတူ arcaded ပြခန်း ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုအလှဆင်။ ဤအပြုသဘောဆောင်သောဒြပ်စင်သည် ၁၀ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် Asturian Asturian ဘုရားကျောင်းများ၌လည်းပုံမှန်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ romanesque ဗိသုကာ.
ချာ့ချ်၏မီးထွန်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အခြားအစောပိုင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများ၏အသွင်အပြင်များကိုလည်းလိုက်နာသည်။ ဒါကြောင့်၎င်းကိုအဓိက nave နှင့် apses နှစ်ခုစလုံး၏ပျံသန်းနေသောနံရံတွင်ပြတင်းပေါက်ငယ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ခေါင်မိုးကိုအဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့်ထောက်ခံထားပြီးကျယ်ပြန့်သောနားမပေါက်နှင့်ဆင်ခြေလျှောရှိသည်။
၁၀ ရာစုအစောပိုင်းတွင် San Miguel de Escalada အဆောက်အအုံထဲသို့ထည့်သွင်းရန်နောက်ဆုံးဆောက်လုပ်ရေးဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အုတ်ရိုးများရှိပြီးမူလကအထပ်သုံးထပ်ပါဝင်သည်။ အတွင်းပိုင်းကိုမင်းဆီကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ့် Semicircular Arch တစ်ခုဖြင့်တံခါးကိုဖြတ်သန်းသွားတယ် San Fructuoso ၏ ChapelPantheon of Abbots ဟုလည်းလူသိများသည်။
ဒါပေမယ့်အဓိကအားဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြ နှစ်ဆမြင်းခွာ Arch ပြတင်းပေါက်။ မျှော်စင်သည် Romanesque ဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏တည်ရှိမှုသည်စပ်စုနေသည်။ ထို့ကြောင့်ဤသက်တံ့အမျိုးအစားကိုမသုံးတော့ပါ။ ယင်းကိုပြုလုပ်ပါကဗိမာန်တော်၏အနောက်ဘက်ပိုင်းတွင်တွေ့ရသောအရာကိုတုပရန်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် San Miguel de Escalada ၏အဆင်တန်ဆာဖြစ်သည် ၎င်း၏အချိန်များအတွက်အလွန်ကြွယ်ဝသော။ ၎င်းသည်မြို့တော်များ၊ ဖရီဇတ်များ၊ သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဟင်းသီးဟင်းရွက်များစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စည်း, အရွက်များနှင့်စွန်ပလွံပင်။ သို့ရာတွင်စပျစ်ပင်အရွက်များတွားနေသောငှက်များကဲ့သို့သောကျစ်ခြင်း၊ ကွက်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကဲ့သို့သောအခြားဂျီ ometric မေတြီပုံစံများရှိသည်။
San Miguel က de Escalada ၏ codex
ယခုနှစ် 922 န်းကျင်, အ ဆရာတော်ဗစ်တာကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သော Leonese ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှဗျာဒိတ်ကျမ်းပါမှတ်ချက်ကိုကူးယူမည့်ကုဒ်နံပါတ်ကိုတီထွင်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ Liebana ၏ Beatus။ ရလဒ်ကတော့ဒါခေါ်ခဲ့သည် 'San Miguel de Escalada ၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာ', မာစတာ illumination မှစွပ်စွဲ Magius။ သို့သော်ဤကုဒ်နံပါတ်ကိုလီယွန်နီးစ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်မဟုတ်ဘဲဆန်မာဗေးဒေါဒီတာဘာရာဒေသ၌ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ လက်ရှိတွင် 'Beato de San Miguel de Escalada' ကိုထိန်းသိမ်းထားသည် မော်ဂန်စာကြည့်တိုက် နယူးယောက်မှ။
San Miguel de Escalada ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ဟာ Leonese မြှို့နယ်မှာတည်ရှိပါတယ် ကျောက်တံတား။ အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ကိုရောက်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့လမ်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ သင့်တွင်ပြည်နယ်၏မြို့တော်မှဘတ်စ်ကားများရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်မကြာခဏမဟုတ်ချေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဥာဏ်မှာသင်ဝင်ပါ သင့်ကိုယ်ပိုင်ကား.
ကနေလုပ်ဖို့ Leonသင်ယူရမည် N-601 သော Valladolid နှင့်အတူမြို့ဆက်သွယ်။ Villarente ၏အမြင့်တွင်သင်ယူရမည် LE-213 အရာ Gradefes ရန်သင့်အားယူပါလိမ့်မယ် သို့သော်မြှို့နယ်၏မြို့တော်သို့မရောက်မီ, သင်ယူရမည် လက်ဝဲမှသွေဖည် ဘုန်းကြီးကျောင်း
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ San Miguel က de Escalada ၎င်းသည် Castile တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ Roman Prequees အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမ၏ Asturian Asturian နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်သူမ၏လှပမှုသည်သင့်ကိုလျစ်လျူရှုထားမည်မဟုတ်ပါ။ ရှေ့ဆက်သွားကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » ယဉျကြေးမှု » San Miguel က de Escalada
San Miguel de Escalada ကိုတည်ဆောက်သောအခါ Castilla သည်လီယွန်နိုင်ငံရှိခရိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Andalusian ဘုန်းတော်ကြီးများသည်သူတို့နေထိုင်ရာLeónတွင်ဖြစ်သည်။ ဒီအဆောက်အ ဦး သည်လီယွန်ဒေသတွင်တည်ရှိပြီး Castilla y Leónသည်၎င်း၏အမည်အရဒေသနှစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းဟာ Castilian မဟုတ်ပါဘူး။
သမိုင်းနှင့်အနုပညာဆိုင်ရာမတိကျမှုများအပြင် (သူတို့ကိုငါမထောက်ပြသေးသော်လည်း) ယနေ့ခေတ်နယူးယောက်ရှိ Morgan စာကြည့်တိုက်နှင့်ပြတိုက်တွင် Beatus of Climbing (အစစ်အမှန်ကျောက်မျက်) အကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည့်အရာမှာစိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်သည်။
San Miguel de Escalada သည်ကျွန်ုပ်၏မြို့ဖြစ်ပြီးလီယွန်တွင်ရှိသည်။ Castilla မှာမဟုတ်ဘူး။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောဒဏ်enseာရီရေးသားခြင်းနှင့်မရေးသား၏မျက်နှာသာလုပ်ပါ။